दोलखामा क्षयरोगीको संख्या बढ्दै |
दोलखामा क्षयरोगीको संख्या बढ्दै
Monday, July 29, 2019 । दोलखा
दोलखामा क्षयरोगीको संख्या घट्ने अवस्थामा नरहेको जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय दोलखाले जनाएको छ । कार्यालयको तथ्यांक अनुसार दोलखामा प्रत्येक वर्ष देखिने नयाँ क्षयरोगीको संख्या बढ्दै गएको जानकारी दिए ।
कार्यालयले उपलब्ध गराएको आर्थिक वर्ष २०६३/०६४ देखि चालु आर्थिक वर्षसम्मको तथ्यांक हेर्दा क्षयरोगीको संख्या घट्न नसकेको देखाएको हो । आर्थिक वर्ष २०६३/०६४ देखि गत २०७४/०७५ अर्थात ११ वर्षको अवधिमा १ हजार ५ सय ७६ जनामा क्षयरोग देखा परेको छ ।
गत आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को दोश्रो चौमासिकसम्मको अवधिमा ७४ जना नयाँ क्षयरोगी देखिएका छन् । ४७ जना पुरुष र २७ जना महिलालाई क्षयरोग लागेको हो । क्षयरोगीको संख्यामध्ये पुरुषको संख्या बढि छ । महिलाको तुलनामा पुरुषहरु बाहिरी क्रियाकलापमा सक्रिय हुने तथा क्षयरोगीमध्ये महिला उपचारका लागि नआउने भएकोले पुरुषको संख्या बढि देखिएको हो ।
१५ देखी ४९ वर्ष सम्मको पुरुष तथा महिलालाई क्षयरोग लाग्ने गरेको जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय दोलखाले जनाएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०६३/०६४ मा एक सय ४४ जना नयाँ क्षयरोगी देखिएका थिए । आर्थिक वर्ष २०६४/०६५ मा १ सय ३७, ०६५/०६६ मा १ सय ३८, ०६६/०६७ मा १ सय ३३, ०६७/०६८ मा १ सय ४४, २०६८/०६९ मा १ सय ३९ जना नयाँ क्षयरोगी देखिएका थिए ।
त्यसैगरी ०६९/०७० मा १ सय २२, ०७०/०७१ मा १ सय ८, ०७१/०७२ मा १ सय २५, ०७२/०७३ मा १ सय ५०, ०७३/०७४ मा १ सय १०, ०७४/०७५ मा १ सय २६ जना नयाँ क्षयरोगी देखिएका थिए । यो तथ्यांक जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय मातहतको निकायमा रहि नियमीत औषधि सेवन गरेका बिरामीहरुको मात्र भएको कार्यालयका क्षयरोग निवारण अधिकृत जितेन्द्र कर्णले बताए ।
क्षयरोग लागेका मध्ये ८५ देखि ९२ प्रतिशत सम्म पुर्ण रुपमा निको भएको जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय दोलखाले जनाएको छ ।
क्षयरोगीले न्युनतम ६ महिना वा ६ महिनादेखि २० महिनासम्म नियमित रुपमा औषधी सेवन गरेमा पुर्णरुपमा निको हुन्छ भने क्षयरोगीको उपचार निशुल्क हुने गरेको छ ।
रोगसँग लड्न सक्ने क्षमता कम भएका र क्षयरोगीको आसपास जाने व्यक्तिहरुलाई क्षयरोग लाग्ने सम्भावना हुन्छ ।
१. मामा, भान्जी पक्राउ
२. भ्रमण वर्षलाई पत्रकार नोयलले सहयोग गर्ने
३. नेपालमा दुर्घटनाले वर्षको ३० अर्ब भन्दा बढी खर्च
४. धरानमा जब उपमहानगरको मेयरमा कांग्रेसले जित्यो
५. मन्त्रालयबीच समन्वय हुन नसक्दा भारत र चीन सीमाका २३ सुरक्षा पोस्ट अलपत्र
६. दि भ्वाइस अफ सिजन-२,का विजेता बने लिम्बु